10 Charming nhare In France By Train | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Charming nhare In France By Train
10 Charming nhare In France By Train
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Iwe wakaita achifamba nechitima? Iwe wakaita kuona zvinoshamisa nhare munyika akafanana France? Kana kuri kuti ndizvo, ipapo iwe kwasvika zvakanaka nzvimbo. Nokuti ino “10 Charming nhare In France By Train” vachakupai mumwe zvachose mazita zvikuru akanaka nematende gumi muFrance. Chii chimwe, Tichava kukuudza sei kuzvizadzisa nechitima!
Chateau of Chenonceau iri rakasiyana mumwe ivo sokuvakira pamusoro nheyo chigayo iri 16fung zana remakore. Unogona nyore asvike Via chitima sezvo Castle ari pedyo chaizvo kuti chiteshi. Unogona kuwana kubva Tours, guta guru zvine pedyo yemauto.
Nantes kuti Tours Zvitima
Lille kuti Tours Zvitima
Zvinowanikwa iri Washington Estate, Nhare iyi zvechokwadi inokosha kushanya kamwe munoona sei anotarisa. Zviri pedyo nepakati Paris izvo kunoita parwendo nayo mhepo.
Dijon kuna Paris Zvitima
Reims kuna Paris Zvitima
Lille kuParis Zvitima
Tours Paris Zvitima
Ehe, zviri pamutemo youmambo, asi uyo ane hanya, zviri mukare! vakavaka Fontainebleau kare 12fung zana remakore, uye richiri anotarisa zvinoorora uye tsime kuchengeta. Zvinonyaradzawo nyore kushanyira. Unogona kusvika kubva kuParis iri isingasviki neawa pamwe Transilien mutsetse R.
Marseille kuParis Zvitima
Unogona kuwana ichi Vakamupfekedza Castle mukati National dzinongoitika Park that’s right outside of Paris. zvisinei, kushanyira ichi chivako chakanaka nechitima ndiyo zvishoma runonyengera sezvo pane chete chomuruki kuti anoenda zvakananga kwairi. Kanenge unogona kunakidzwa munhu chitima tasva kuna Paris!
Strasbourg kuParis Zvitima
Zurich kuParis Zvitima
MuFrankfurt kuParis Zvitima
Geneva kuti Paris Zvitima
Chambord Castle chinhu mesmerizing zvechokwadi uye yaiva Castle kuti zviripo kushanyira. Kusvika pariri, uchaita kuva tekisi kana chomuruki kubva muguta Blois. zvisinei, richisvika Blois hunowanikwa kubva mumaguta akawanda muFrance. Unogona kuenda nawo isingasviki neawa nehafu paaifamba kubva Paris.
The Castle Amboise ndeimwe inofadza nematende muFrance. Hazvina chindori chaiye mavakirwo kubva Renaissance. Unogona kusvika Chateau nyore nechitima kubva mumaguta akawanda muFrance Via imwe TGV kana Intercity nezvitima.
We zvikuru vanokurudzira ichi akanaka, Castle diki sezvo yakakurumbira Alexandre Dumas akaivaka! Unogona kusvika Monte Cristo Castle nyore ane chitima mutsetse womunzvimbo sezvo zvakanaka muParis! Uchifunga, unogona kutora chero chitima kana uri kuuya kubva imwe nzvimbo.
Chinhu zvechokwadi kwazvo duku Castle kuvakwa zvakanaka pachitsuwa mukati chiduku nyanza! Haikwanise kuwana chero kuwedzera kutarisika zvakanaka kupfuura izvi. Unogona kuwana kuimba yemauto nyore nokutora hafu yeawa nechitima atasve kubva muguta Tours. Zvadaro uchafanira chete vanofanira kuita yemaminitsi 20 mufambo yemauto.
It Varege zvezvisarudzo mashiripiti nematende muFrance, asi taifanira dzairitaura. Panhare iri akapfuma munhoroondo, uye zviri zvechokwadi mukare, kwete chete zvayo fadza nzira! The dzepedyo chiteshi kuimba yemauto iri Selestat, uye iwe unogona kusvika kubva Strasbourg kana mamwe maguta akawanda aiva pedyo.
Paris kuna muStrasbourg Zvitima
Luxembourg kuna muStrasbourg Zvitima
Nancy kuna muStrasbourg Zvitima
MuBasel kuna muStrasbourg Zvitima
The Chateau de Pierrefonds Hapana mubvunzo kupfuura vakakodzera ari pakarongwa pamusoro kupfuura mashiripiti nematende muFrance. Unogona chete kusvika Castle nokutora chitima kuenda Compiegne, zvino kushandisa bhazi kuti Pierrefonds.
Kana uchida more info pamusoro nechitima pakufamba 10 Charming nhare In France By Train, unogona isu runhare kuburikidza yedu yepaIndaneti.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-castles-france%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
nematende	europetravel	famba	travelfrance
Top European Train Tours haufaniri Miss
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Spain, Travel Europe
Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Sweden, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba UK, Travel Europe